Syria: Hetsika Avotsory i Tariq · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2017 5:19 GMT
Nanao aterineto i Tariq Baiasi indray andro, ary namela fanehoan-kevitra tao amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra, manakiana ny sampam-piarovana malaza. Tsy ela taorian'izany, tamin'ny 7 Jolay 2007, nosamborina tao an-tanàna niaviany ao Banyas izy, ka tsy mbola nahazoam-baovao ny momba azy. Hatramin'ny androany, mbola any am-ponja i Tariq, tsy misy fitsarana, efa mihoatra ny enim-bolana izay.
Nanangana tranonkala fanentanana hamotsorana an'i Tariq sy fanangonan-tsonia antserasera i Razan sy ny vondrona bilaogera mavitrika. Makà minitra vitsy azafady mba hanao sonia ny fanangonan-tsonia ato. Nanoratra lahatsoratra lavabe momba ny olana tao amin'ny bilaoginy i Razan, anisan'izany ny resadresaka niarahana tamin'i Razan Zeitouneh, mpikatroka:
Nizara ny rohin'ny fanentanana ireo bilagera hafa, ary naneho ny fanohanan'izy ireo. Naneho ny hatezerany i Abu Kareem ao amin'ny Levantine Dreamhouse:
Annie nanoratra momba izany ato, ary i Yazan, ato.
Nilaza koa i Ahmed hoe: